(၂၂၂၂၂) သပိတ္ဆင္ႏဲြေနၾကတဲ့ျပည္သူေတြနဲ႔ အတူ တသားတည္း ရပ္တည္အားေပးရင္း မုန္႔၊ဦးထုတ္ႏွင့္ ေရသန္႔အေအးမ်ားစြာ လွဴဒါန္းေနတဲ့ ေနျခည္ဦးရဲ႔ ဗီဒီယုိဖုိင္…. – ျမန္မာသတင္းစံု
(၂၂၂၂၂) သပိတ္ဆင္ႏဲြေနၾကတဲ့ျပည္သူေတြနဲ႔ အတူ တသားတည္း ရပ္တည္အားေပးရင္း မုန္႔၊ဦးထုတ္ႏွင့္ ေရသန္႔အေအးမ်ားစြာ လွဴဒါန္းေနတဲ့ ေနျခည္ဦးရဲ႔ ဗီဒီယုိဖုိင္….
Posted on February 22, 2021 Author admin	Comments Off on (၂၂၂၂၂) သပိတ္ဆင္ႏဲြေနၾကတဲ့ျပည္သူေတြနဲ႔ အတူ တသားတည္း ရပ္တည္အားေပးရင္း မုန္႔၊ဦးထုတ္ႏွင့္ ေရသန္႔အေအးမ်ားစြာ လွဴဒါန္းေနတဲ့ ေနျခည္ဦးရဲ႔ ဗီဒီယုိဖုိင္….
၂၂၂၂၂) သပိတ္ဆင္ႏဲြေနၾကတဲ့ျပည္သူေတြနဲ႔ အတူ တသားတည္း ရပ္တည္အားေပးရင္း မုန္႔၊ဦးထုတ္ႏွင့္ ေရသန္႔အေအးမ်ားစြာ လွဴဒါန္းေနတဲ့ ေနျခည္ဦးရဲ႔ ဗီဒီယုိဖုိင္….
သရုပ္ေဆာင္တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္သလို Social Influencer တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္တဲ့ ေနျခည္ဦးကေတာ့ လတ္တေလာမွာ ပရိသတ္ေတြရဲ့ ေဝဖန္မႈကို ရရိွေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေနျခည္ဦးက စစ္မိသားစုကေန ေမြးဖြားလာခဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္တာေၾကာင့္ အခုလို နုိင္ငံေရးမတည္မျငိမ္ျဖစ္မႈမွာ ပရိသတ္ေတြက ေဝဖန္မႈေတြရိွသလို ေနျခည္ကိုယ္တိုင္ကလည္း သူမကို အားေပးတဲ့ ပရိသတ္ေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ေနျခည္ဦးကေတာ့ အသက္ျပည့္ျပီးတဲ့ လူတစ္ေယာက္အေနနဲ့ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ့ ရပ္တည္ျပီး ျပည္သူလူထုနဲ့ တသားတည္းရိွေနေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေနျခည္ဦးက မေန့က ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၁) ရက္ေန့မွာ မႏၱေလးျမိဳ့ စိန္ပန္းရပ္ကြက္က ျပည္သူေတြအတြက္ ျခံဳေစာင္ေတြလွဴဒါန္းေပးခဲ့သလို ဒီကေန့ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၂) ရက္ေန့မွာလည္း (၂၂၂၂၂) သပိတ္အတြက္ လမ္းေပၚထြက္လာတဲ့ မိဘျပည္သူေတြကို စားေသာက္စရာမ်ား လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း အခုလိုပဲ ေျပာလာပါတယ္။
ေနျခည္ဦးက “လွည္းတန္းက ျပည္သူေတြအတြက္ၾကာဇံေၾကာ္ပြဲ (၄၀၀၀) ေက်ာ္ ဘဲသားမုန႔္ (၁၀၀၀) Royal D Hype ေရသန႔္ ဘူး (၅၀၀၀) ကို ဒီေန႔ သူငယ္ခ်င္းေတြ စုၿပီး လႉျဖစ္ၾကပါတယ္။ အားလုံးပဲ ဂ႐ုစိုက္ၾကပါ။ ေနျခည္တို႔ အားလုံးနဲ႔အတူတူရွိေနပါမယ္။” ဆိုျပီး သူမရဲ့ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္နွာကေန ေျပာလာပါတယ္။
ေနျခည္ဦးကေတာ့ လက္ရိွအခ်ိန္မွာ သူမရဲ့ မိဘအသိုင္းအဝုိင္းကို ေမ့ထားျပီး ျပည္သူလူထုနဲ့ တသားတည္းရိွေနေပးမယ္လို့ ေျပာလာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ ပရိသတ္ႀကီးအားလုံး သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုကၸါတယ္ေနာ္။
(၂၂၂၂၂) သပိတ်ဆင်နွဲနေကြတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ အတူ တသားတည်း ရပ်တည်အားပေးရင်း မုန့်၊ဦးထုတ်နှင့် ရေသန့်အအေးများစွာ လှူဒါန်းနေတဲ့ နေခြည်ဦးရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်….
သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်သလို Social Influencer တစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ နေခြည်ဦးကတော့ လတ်တလောမှာ ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုကို ရရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နေခြည်ဦးက စစ်မိသားစုကနေ မွေးဖွားလာခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် အခုလို နိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ်ဖြစ်မှုမှာ ပရိသတ်တွေက ဝေဖန်မှုတွေရှိသလို နေခြည်ကိုယ်တိုင်ကလည်း သူမကို အားပေးတဲ့ ပရိသတ်တွေ လျော့နည်းသွားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် နေခြည်ဦးကတော့ အသက်ပြည့်ပြီးတဲ့ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ရပ်တည်ပြီး ပြည်သူလူထုနဲ့ တသားတည်းရှိနေပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
နေခြည်ဦးက မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၁) ရက်နေ့မှာ မန္တလေးမြို့ စိန်ပန်းရပ်ကွက်က ပြည်သူတွေအတွက် ခြုံစောင်တွေလှူဒါန်းပေးခဲ့သလို ဒီကနေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၂) ရက်နေ့မှာလည်း (၂၂၂၂၂) သပိတ်အတွက် လမ်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ မိဘပြည်သူတွေကို စားသောက်စရာများ လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း အခုလိုပဲ ပြောလာပါတယ်။
နေခြည်ဦးက “လှည်းတန်းက ပြည်သူတွေအတွက်ကြာဇံကြော်ပွဲ (၄၀၀၀) ကျော် ဘဲသားမုန့် (၁၀၀၀) Royal D Hype ရေသန့် ဘူး (၅၀၀၀) ကို ဒီနေ့ သူငယ်ချင်းတွေ စုပြီး လှူဖြစ်ကြပါတယ်။ အားလုံးပဲ ဂရုစိုက်ကြပါ။ နေခြည်တို့ အားလုံးနဲ့အတူတူရှိနေပါမယ်။” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာကနေ ပြောလာပါတယ်။
နေခြည်ဦးကတော့ လက်ရှိအချိန်မှာ သူမရဲ့ မိဘအသိုင်းအဝိုင်းကို မေ့ထားပြီး ပြည်သူလူထုနဲ့ တသားတည်းရှိနေပေးမယ်လို့ ပြောလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက္ပါတယ်နော်။
(၄၇)သိန်းတန်ဖိုးရှိ မဟာပဌာန်းကျ မ်းတွဲ(၅၀)လှူဒါန်းဖို့အတွက် ပူဇော် လို သူတွေကို ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တဲ့ စမိုင်းလ်
ဆယ်လီကမ္ဘာပရိသတ်ကြီးရေ စမိုင်းလ်ကတော့ ဓမ္မအလှူဒါန အဖြစ် ပဌာန်းတွဲကျမ်း- ၅အုပ်တွဲ အစုံ ၂၀၀ ကို ၄၇သိန်းဖိုး လှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ မကြာသေးမီက ပရိသတ်တွေကို အသိ ပေး ခဲ့ ပါတယ် ။ ။ စာအုပ်တွေရဲ့တန်ဖိုးမြင့်လို့ အလကားပေးလို့ ယူတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ တကယ်ကို ပူဇော်ချင်တဲ့ သူတွေကိုပဲရွေးပြီး ဓမ္မဒါနပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့လည်း စမိုင်းလ်က သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေတဆင့် ပရိသတ်တွေကိုအ သိပေးခဲ့ပါတယ် ။
ကိုဗစ်ကာလမှာ မဲဆွယ်လှည့်လည်နေကြတဲ့ သူတွေကို စံရတီမိုးမြင့် ဒဲ့ပြောပြီ
ပရိသတ္ႀကီးေရ မင္းသမီးေခ်ာေလး စံရတီမိုးျမင့္ကေတာ့ ဗီဒီယိုဇာတ္ကားေတြ၊ ေၾကာ္ျငာေတြ
ဆရာဝန်၊ ဆရာမတွေပေးတဲ့ အထူးခံနိုင်ရည်အင်အားဖြစ်စေခဲ့တဲ့ ကုထုံးတစ်မျိုးကို ပြောလာတဲ့” ကျော်သူ”
ပရဟိတမင်းသားကြီး ဦးကျော်သူနဲ့ သူ့ကို စောင့်ရှောက်ဖို့အဖော်အဖြစ်လိုက်သွားပေးခဲ့တဲ့ မင်းသားထွန်းကိုကိုတို့ကတော့ လတ်တလော ဝေဘာဂီဆေးရုံမှာ ကုသမှုခံယူလျက်ရှိပါတယ်။
သူ့တန်ဖိုးနဲ့သူပါ ဘဒိုရေ ကြက်ဥပြုတ်စားပါအုန်းတဲ့